Nezve kupinda kwekushanda kweTPAN - Iyo Nyika Kurume
musha » Noticias » Rwepamutemo Rezvemitemo » Nezve kupinda kwekushanda kweTPAN
Nezve kupinda kwekushanda kweTPAN
21 / 01 / 2021 kubudikidza Antonio Gancedo
Kutaurirana pamusoro pekupinda musimba kweChibvumirano pane Kurambidzwa kweNyukireya Zvombo (TPAN)
Chirevo pamusoro pekupinda musimba kweChibvumirano pane Kurambidzwa kweNyukireya Zvombo (TPAN) uye gore rechimakumi manomwe nemashanu reChisarudzo 75[I] weUN Security Council
Takatarisana ne "kutanga kwekubviswa kwezvombo zvenyukireya."
Musi waNdira 22, iyo Chibvumirano pane Kurambidzwa kweNyukireya Zvombo (TPAN). Ichanyatsorambidza mapato mapato kubva mukuvandudza, kuyedza, kugadzira, kugadzira, kuwana, kubata, kuendesa, kushandisa kana kutyisidzira kushandisa zvombo zvenyukireya uye kubatsira kana kukurudzira zviito zvakadaro. Ichaedza kusimbisa mutemo uripo wepasi rese uyo unosungira matunhu ese kuti asayedze, ashandise kana kutyisidzira kushandiswa kwezvombo zvenyukireya.
Para Nyika isina Hondo uye Mhirizhonga Icho chikonzero chekupemberera nekuti kubva ikozvino zvichienda kuchanyatso kuve nechiridzwa chepamutemo munharaunda yepasirese iyo inotsanangudza zvishuwo izvo kwemakumi emakore zvakafukidzirwa nevagari vazhinji venyika munyika zhinji.
Mukutanga kweTPAN, njodzi dzinounzwa nekuvapo kwezvombo zvenyukireya uye nenjodzi dzinokonzeresa rubatsiro rwevanhu dzinogona kubva mukushandisa kwavo dzakaratidzirwa. Nyika dzakabvumidza Chibvumirano uye idzo dzakaburitsa pachena njodzi iyi uye nekudaro vanoratidza kuzvipira kwavo pasirese zvombo zvenyukireya.
Kune uku kutanga kwakanaka uye kunoshingairira isu tinofanira ikozvino kuwedzera kuti nyika dzinosimbisa dzinogadzira uye dzinobvumidza mutemo kuti ushandise mweya wechibvumirano: kusanganisira zvinorambidzwa pakufamba uye nemari yezvombo zvenyukireya. Kungo rambidza mari yayo, kugumisa kudyara muindasitiri yayo, kwaizowana kukosha kwakakosha uye kwakakosha, kwakakosha mukumhanya kwemaoko enyukireya.
Iye zvino nzira yakaiswa uye tinotarisira kuti huwandu hwenyika dzinotsigira TPAN huchawedzera mune isingamiswe. Zvombo zvenyukireya hazvisisiri mucherechedzo wekufambira mberi kwesimba uye simba, ikozvino iwo mucherechedzo wekudzvinyirira uye njodzi kuvanhu, kutanga kwezvose, kune vagari venyika pachavo vane zvombo zvenyukireya. Nekuti iyo "muvengi" zvombo zvenyukireya zvakanangwa pamusoro pezvose kumaguta makuru epasi anazvo, kwete kune izvo zvisina.
TPAN yakawanikwa semhedzisiro yemakore makumi manomwe neshanu ekurwisa zvombo zvenyukireya nemasangano evagari kubvira pakabhombwa mabhomba enyukireya eHiroshima neNagasaki kwakaratidzira njodzi yavo. Iwo anga ari masangano, masangano nemapuratifomu, nerutsigiro rwemeya, paramende nehurumende vakakurudzirwa kunyaya iyi yakaramba ichirwira makore ano kusvika panguva ino.
Mumakore ese aya, matanho akakosha akatorwa senge: zvibvumirano zvekurambidza kuyedzwa kwenyukireya, kudzikiswa kwenhamba yezvombo zvenyukireya, kusapararira kwezvombo zvenyukireya pamwe nekurambidzwa kwavo munyika dzinopfuura zana kuburikidza nenzvimbo dzisina zvombo. . nyukireya (Zvibvumirano zve: Tlatelolco, Rarotonga, Bangkok, Pelindaba, Central Asia Nuclear Weapon-Mahara, Mongolia's Nyukireya-Zvombo-Mahara, Antarctic, OuterSpace uye Sea Bed).
Panguva imwecheteyo, haina kumisa nhangemutange yemaoko enyukireya nemasimba makuru.
Fungidziro yekuzvidzivirira yakundikana nekuti kunyangwe ichitadzisa kushandiswa kwayo mukurwa kwehondo, iyo atomiki apocalypse wachi (DoomsdayClock yakarongedzwa nemasayendisiti nevanohwina weNobel) inoratidza kuti isu tiri masekondi zana kubva pakurwa kweatomu. Iko kugona kunowedzera gore negore kuti zvombo zvenyukireya zvichashandiswa netsaona, kuwedzera kukakavara, kusarongeka kana chinangwa chakaipa. Iyi sarudzo inogoneka chero bedzi zvombo zviripo uye zviri chikamu chemitemo yekuchengetedza.
Chombo chenyukireya chinoti pakupedzisira chichafanirwa kugamuchira zvavanosungirwa kuti vawane zvombo zvenyukireya. Mune izvi vakabvumirana mukugadziriswa kwekutanga kweUnited Nations, Resolution yeGeneral Assembly yeUnited Nations, yakagamuchirwa muna Ndira 24, 1946 nekubvumirana. Zvakare muChinyorwa VI cheiyo Isiri-Yekuwedzera Chibvumirano vakazvipira ivo kushandira zvombo zvenyukireya seMatunhu Mapato. Pamusoro pezvo, nyika dzese dzakasungwa netsika nemitemo yepasi rose nezvibvumirano zvinorambidza kutyisidzira kana kushandiswa kwezvombo zvenyukireya, sekusimbiswa neInternational Court of Justice mu1996 uye UN Human Rights Committee mu2018.
Kupinda musimba kweTPAN uye gore rechimakumi manomwe neshanu reSecurity Council Resolution, mazuva maviri gare gare, zvinopa mukana wakakodzera wekuyeuchidza nyika dzese nezve kutadza kwemutemo kwekutyisidzira kana kushandiswa kwezvombo zvenyukireya uye nezvavanosungirwa nezvombo. zvine chekuita nekutarisisa nekuzvishandisa nekukasira.
Musi waJanuary 23, zuva mushure mekutanga kushanda kweTPAN, iyo MSGySV musangano mudyandigere wepasi rose mushandirapamwe ICAN ichaita Tsika Cyberfestival para celebrar "Nhanho huru kuvanhu."". Ichave irwendo rweanopfuura maawa mana kuburikidza nemamwe emakonzati, zvirevo, zvakapfuura nezvazvino zviitiko, nevatambi nevamiriri vanorwisa zvombo zvenyukireya uye nerunyararo pasirese.
Inguva yekupedza iyo nguva yezvombo zvenyukireya!
Remangwana revanhu richazogoneka pasina zvombo zvenyukireya!
[I]Komiti yeVashandi veMasoja ichagadzwa kuti ipe mazano nekubatsira Security Council mune zvese zvine chekuita nezvido zvemauto zveKanzuru zvekuchengetedza runyararo pamwe nekuchengetedzeka kwenyika, kumisikidza uye kuraira kwemauto akaiswa, pakutongwa kwezvombo uye zvinogona kudzora zvombo.
World Coordination Team yePasi Pasina Hondo uye Mhirizhonga
Categories Rwepamutemo Rezvemitemo Kubatikiti kufamba